Adeegyada Qashinka Dheeraadka | Saint Paul, Minnesota
Cusbooneysii Adeega Qashinka Citywide 8/23/19
Xiliga Agoosto 22, 2019, Maxkamada Sare Minnesota waxay ku amartay in Caasimada meeleyso Qaynuunka aasaasay sharciyada qashin aruurinta ee cod bixinta codeynta caasimada oo dhan.
Dagayaashee Saint Paul ayaa U baahan inuu Ogaado oo Sameeyo
Qashin aruurinta waxay u soconeysaa sida caadiga ah ee Caasimada Saint Paul.
Dagayaasha uma baahno inay helaan shirkad qashinka oo cusub ama joojiyaan adeegooda qashinka hadeer.
Dagayaasha waa inay sii wadaan inay dhigaan dambiisha qashinka caasimadooda ee ka baxsan maalintooda aruurinta balansan.
Dagayaasha waxay helayaan biilka qashinka sadex biloodlaha (oo adeega Oktoobar 1-Diseembar 31, 2019) ee ka imaanayo shirkadooda qashinka ee horaanta Oktoobar.
Dagayaasha waa inay bixiyaan biilkooda qashinka shirkadooda qashinka oo taariiqda la sugayo ee Oktoobar 25, 2019.
Dagayaasha waxay ku codeynayaan Qaynuunka 18-39 ee Nofeembarta 5, 2019 codeynta doorashada guud.
Goorma ayaan helayaa biilka qashinka kale?
Horaantii Oktoobar, waxaad heleysaa biilka qashinka sadexda bilood (oo adeega Oktoobar 1-Diseembar 31, 2019) ka bilow shirkadaada qashinka.
Si looga fogaado helitaanka qidmooyin daahsan, fadlan sii biilka qashinkaaga shirkadaada qashinka oo xiliga Oktoobar 25, 2019.
Miyay jireysaa codeynta Qaynuunka?
Qaynuunka waxay ahaaneysaa Nofeembar 5, 2019 codeynta.
Haddii ay jirrto afti iyo Qaynuun 18-39 waa laga saaray (oo micnaheeda yahay Qaynuunka markale ma shaqeynayo), maxaa ku dhaco adeegeyga qashinka?
Qaynuunka ma xakameeyo aruurinta qashinka.
Illaa lagu jaheeyo haddii kale Maxkamada Sare, xiriirka jiray ee Caasimada ee shirkadaha qashinka way sii bilaabaneysaa. Caasimada way sii wadeysaa inay ku shaqeyso sida waafaqsan xeerarka heshiiska jiray.
Shirkadaha qashinka hadeer waxay weli qaadayaan qashinka ee Saint Paul.
Sida loo bixiyo barnaamijka qashinka oo isbadeleyso. Badelkii dagayaasha, ka qeyb ah barnaamijka, toos u siinta shirkadooda qashinka, Caasimada ayaa ku bixineyso shirkadaha dhinaca deeqda guud ee Saint Paul. Deeqda guud ee Caasimada waxaa lagu maalgeliyaa canshuurta hantida qof walboo kale.
Qarashka la qiyaasay ee barnaamijka qashinka Caasimada 2020 waa $27.1 milyan, taas oo u baahaneyso dheeraad boqolkiiba 17.4% ee canshuurta hantida.​
Tani waxay kordhineysaa canshuurta hantida guud oo 2020 illaa 22.2%.
Tani waxay gaareysaa korodhka canshuurta hantida oo $184 ka badan canshuurta hantida gofanatooraha soo jeediyay 2020 oo guriga qiyamka dhexaadka ah.
Tani waxay gaareysaa korodhka canshuurta dhismaha oo $664 ka badan canshuurta hantida gofanatooraha soo jeediyay 2020 oo hantida ganacsiga qiyamka dhexaadka ah.
Miyaa qashinkeyga weli la qaadayaa Nofeembar 5 kadib?
Haa. Qashinkaaga waxaa la aruurinayaa isla maalinta oo shirkadaada qashinka.
Illaa haddii kale ay tilmaanto Maxkamada Sare ee Minnesota, xiriirka shirkadaha qashinka wuu bilaabanayaa iyo Caasimada waxay sii wadeysaa inay ku shaqeyso sida waafaqsan xeerarka xiririka.
Maxaa dhaco haddii Qaynuunka 18-39 lagama saarin?
Adeega qashinka dagayaasha Saint Paul waxay la sii wadayaan sida caadiga ah shirkadaha qashinka, iyo way sii wadayaan inay sii diraan dagayaasha oo adeega qashinka.
Wixii su'aalo dheeraad ah, fadlan soo wac qadka warbixinta qashinka 651-266-6101. Turjubaano waa la helayaa.
Adeegga Qashinka Magaalada Idil ee Saint Paul (Saint Paul’s Citywide Garbage Service) waxaa laga helaa qaadaha qashinka loo xilsaaray jidka ama luuqa. Qaadeyaasha St. Paul Haulers, LLC, koox ka tirsan qaadeyaasha shattiga haysta, waxay dhamaan hantida la daggan yahay 1-4 guri ka aruurisaa qashinka. Waxaa loo baahan yahay adeegga qashinka, kaddibna sicirada iyo adeegga waa isla mid, Sainta Paul oo idil.
Sannad kasta waxaa la aruuriyaa khidmadda wasakhda adag taasoo Siistemka canshuurta hantida Dagmada Ra
msey. Dhamaan hantida la daggan yahay ee ka kooban 1-4 guri waxay taageersan yahiin adeegga qashinka siistemka. Khdimadda sannadka waa $24.60 halkii guri ($2.05 halkii bil). Khidmaddaan waxaa lagu bixiyaa kharashka ​ku baxa gawaarida qashinka, maamulka brograamka, iyo waxbarashada iyo dadaalka xariirinta.
Heerarka adeegga qashinka aasaasiga iyo sicirada
Biilkaada saddaxda bil waxaa laga soo diraa oo toos loo siiyaa qaadahaada, lama siiyo magaalada.
Cabbirka Gaariga: Aruurinta: # Waxaa Ku Jira Waxyaabo
Waaweyn (halkii sanno): Sicirka Saddaxdii Bil*:
Yar​ Todobaad ku dhaaf 2 $60.84/saddaxdii bil
Yar​ Todobaad kasta 2 $70.32/saddaxdii bil
Dhexdhexaad​ Todobaad kasta 3 $96.09/saddaxdii bil
Dhexdhexaad Todobaad kasta​ 3 $102.45/saddaxdii bil
*Sicirada saddaxda bil waxaa ku jira dhamaan khidmadaha iyo canshuurta dagmada iyo gobolka.
Sida saxsan ee loo meeleeyo gaariga
Waxaad gawaaridiaada dhigtaa geeska luuqa ama dhinaca lagu socdo afkana u sii jeedi dibadda ugu dambayn 6:00 a.m. maalinta qaadista.
Dhamaan alaabta waa in ay geli karaan gudaha gaarigaada, daboolka oo daboolan.
U dhaaf labo cag oo boos ah inta u dhexeyso gawaaridaada iyo waxyaabaha kale, sida geedaha, siligga, garaashyada, ama barafka tuuran.
Haddii aad qabtid luuq, hubso in nambarada guriga lagu dhajiyo garaashka.
Hel maalinta aruurintaada
Inta badan xaafadaha waxay helaan adeegga aruurinta qashinka iyo dib u cusboneysiinta isla maalinta. Si aad u ogaatid qaadahaada iyo maalinta aruurinta, geli cinwaanka gurigaada stpaul.gov/garbagemap, ama wac 651-266-6101.
Aruurinta todobaad ku dhaaf kasta
Haddii aad qabtid gaari qaada 35-galan, midabka daboolka yahay maroon, qashinkaada waxaa la qaadaa todobaad ku dhaaf kasta.
Jadwalka Aruurinta Todobaad ku Dhaafka 2019 waxaad ka heli kartaa.
Baddalaadda Cabbirka Gaarigaada
Milkiileyaasha hantida waxay baddali karaan gaarigooda hal mar sannadkii iyagoo aan bixinin khidmad. Kharashka ku baxa baddalaadda gaari dheeraad ah waa $25 halkii baddalaad. Baddalaadda gaariga waxaa ka mid ah, balse kuma eka, baddalaadda heerka adeegga ama baddalaadda gaariga taaso ugu wacan burbur ama khasaaro. Fadlan la xariir qaadahaada si aad u codsatid in lagaa baddalo gaariga.
Milkiileyaasha hantida waxay kaloo la xariiri karaan qaadahooda si ay u codsadaan gawaari kale oo lagu qaado qashinka haddii ay u baahdaan qaad badan.
La xariir shiradaada qashinka cusub si aad isugu qortid adeegyadaan.
Hadba sida uu yahay cabbirka gaarigaada, waxaad yeelan kartaa 2 ama 3 shay "weyn" oo la soo aruuriyo sannad kasta, lagana bixinin kharash dheeraad ah. Haddii aad u baahan tahay in aad iska tuurtid alaabo badan oo balaaran, waxaad bixin kartaa $10-$35 halkii shay (lagu daray canshuur) si lagaaga qaado. Milkiileyaasha hantida waxay wici karaan qaadaha ku qoran dusha buuggaan si aad u ballansatid qaadidda shayga weyn. Waxay ku siin doonaan tilmaamaha la xariiro goorta iyo meesha la dhigo dibadda.
Si aad u ogaatid liiska alaabta "waaweyn" ee la ogol yahay iyo khidmadaha, booqo halkan.
Si aad u ballansatid qaadidda shayga "weyn":
La xariir qaadahaada qashinka cusub ugu yaraan 48 saac ka hor inta aan la gaarin maalinta caadi ahaan la aruuriyo qashinka.
Qaadaha ma qaadi doono alaabta balaaran ee dibadda la soo dhigo haddii aysan ku jirin jadwalka.
Qaadaha wuxuu kuu sheegi doonaa maalinta loo baahan yahay in aad alaabtaada waaweyn u soo saartid dibadda si loo qaado. Waxaa dhici karto in aysan ahayn maalinta caadi ahaan lagaa qaado qashinka.
Waxyaabaha waaweyn ha dhigin gudaha gaarigaada qashinka.
Waxyaabaha waaweyn waxaad dhinac dhigtaa gaarigaada meesha caadi ahaan laga qaado.
Qaadaha qashinka wuxuu qaadi doonaa shayga weyn muddo 7 maalin gudahooda kaddib marka uu helo codsiga in la qaado shayga.
Qaadaha wuxuu la socon doonaa tirada alaabta waaweyn ee laga qaado reerkaada.
Joojinta adeegga waxaa loo adeegsan karaa maqnaashada ku meel gaark ah, fasaxyada la fidsado. Joojinta adeegga looma isticmaali karo in aan la bixinin adeegga haddii guriga la daggan ayahay.
Si loo joojiyo adeegga qashinka ilaa muddo, waa in aad ogeysiisid qaadahaada ugu yaraan labo todobaad ka hor inta aan la gaarin taariikhda bilowga waqtiga joojinta adeegga. Joojinta adeegga waxaa la soo gudbin karaa labo jeer sannadkii, waa in la soo dalbado ugu yaraan afar todobaad, iyo waxay gaari kartaa ilaa wadarta 26 todobaad. Waa laguu tixgelin doonaa tirada todobaadyada lagaa joojiyay adeegga marka la soo saaro biilka adeegga dib loo bilaabo.
Waxaad foomka arjiga Joojinta Ku Meel Gaarka Adeegga ka heli kartaa stpaul.gov/servicehold. Waxaad foomka oo dhamaystiran u soo dirtaa qaadahaada.
Haddii hantidaada aan la degi doonin muddo dheer, la xariir magaalada, telefoonka 651-266-6101 si aad kala hadashid talooyinka kuu banaan.
Adeegga Socodka (Walk-Up Service)
Haddii aad qabtid baahi la xariirto jirka, dhamaan qaadeyaasha qashinka waxay bixin karaan Adeegga Socodka (Walk-Up Service) ee lacag la'aanta ah xagga aruurinta qashinka haddii loo baahdo.
Haddii aadan la kulmin shardiga in aad tahay qof aan jir ahaan isku filneen, waxaad bixin kartaa kharashka ku baxa in laguugu yimaado albaabka taasoo ku xeran masaafada gaarigaada u jiro luuqa/dhinaca lagu socdo.
In ka yar 100 cag: $25 halkii bil (lagu darray canshuur)
In ka badan 100 cag: $50 halkii bil (lagu darray canshuur)
Aruurinta Wasakhda Deydka Guriga
Dhamaan qaadeyaasha qashinka waxaa laga helaa adeegga wasakhda deydka, waxaana la bixiyaa khidmad dheeraad ah.
Adeegga wasakhda deydka xiliga waxaa la helaa Abriil 15-Nofeembar 30 sannad kasta. Waxaad ka dooran kartaa labada fursad:
Adeegga Isku Qoridda: Waxaad diyaarin kartaa gaariga wasakhda deydka ilaa sideed bacyada la gubo si loo aruuriyo todobaad kasta ($120 halkii sanno). La xariir qaadahaada si aad u diyaarsatid adeegga.
Adeegga Aan-Leysku-Qorin: Waxaad diyaari kartaa bacda la gubi karo ama duub wasakhda taal dhinaca gaarigaada qashinka ($3 halkii bac/duub). Wac qaadahaada si aad u codsatid adeegaan ugu yaraan 48 saac ka hor inta aan la gaarin maalinta aruurinta qashinka caadiga. Qaadahaada wuxuu kuu sheegi doonaa maalinta aad dibadda soo dhigi doontid bacdaada (bacyadaada) la gubi karo ama xermadaada (xermooyinkaada) si loo aruuriyo.
Aruurintaada caadiga waxaa dib loo dhigi doonaa hal maalin haddii ay ku soo toosto fasaxyada la xusso ee soo socdo ama kaddib.
Maalinta Xasuusta (Memorial Day)
Maalinta Shaqaalaha (Labor Day)
Maalinta Mahadnaqa (Thanksgiving)
Maalinta Dhallashada Ciise (Christmas Day)
Jadwalka Aruurinta Fasaxa:
Waxaad haysan kartaa hal geed nool fasaxa, aadan bixinin kharash dheeraad ah, inta u dhexeyso Janaayo 2-15 sannad kasta. Tan waa adeeg gaar ah oo laga helo aruurinta shayga weyn mana loo xisaabo sida shay weyn. Geedaha fasaxyada waa in aysan ka weyneen 6 cag oo dherer ah iyo 20 bound oo miisaan ah.
Waxaad geedkaada dhinac dhigtaa gaariga qashinka maalinta qaadidda inta u dhexeyso Janaayo 2-15.
Dhamaan geedaha waa in laga saaro dhamaan qurxinta iyo joogyada.
Lama ogola geedaha la alifay.
Reer kasta ku soo koob hal geedka fasaxa (ama hal geed halkii guri xagga hantida guryaha badan).
Geedaha fasaxa oo dheeraad ah, geedaha la alifay, ama geedaha ka weyn 6 cag xagga dhererka waxaa loo aruurin karaa sida shay weyn.